Izvo nekuvandudzwa kwecheravha uye muchina wekuvaka, kune zvakawanda uye zvigadzirwa zvakawanda zvinoenderana nemamiriro akasiyana akagadzirwa, uye heino nhau dzichangoburwa pamusoro pemuchina kubva ku Earthmovers
Yakaoma Hitter - Hitachi ZX690LCR-7
Eoghan Daly anoshanyira iyo inofungidzirwa kuve yekutanga Dash 7 vhezheni yeHitachi Construction's 690LCR yekuchera kuenda kunoshanda muEurope, ichishanda paLive Work Kukura kuCentral Park saiti muDublin.
Iyo inopenya orenji muchina ndeya Shannon Valley Boka uye inofambiswa neiyo Stage 5 emissions-inoenderana injini inogadzira 348kW uye 2,050Nm yetoriki pa 1,300rpm. Kuyera matani 71.7 mumatombo ekuchera matongo, iyo 690LCR yakaratidza kushanda kwayo pakuputsa girenayiti yakaoma neRammer C130 uye Epiroc hydraulic nyundo yekubatanidza.
Veteran opareta Tom Reilly akaudza Eoghan, “VaHitachi vagara vari machina chaiwo evashandisi uye iyi nyowani Dash 7 iri nani. Senguva dzose, ine marongero akanaka uye inotsvedza pane levers zvakare. ”
Verenga zvimwe nezve Hitachi ZX690LCR-7 uye Shannon's Dublin mashandiro muPasmomovers Magazini.
Muchina Wakanyanya - Komumo's Sumo Dozer
Mune yaNovember 2020 nyaya yeEARTHMOVERS MAGAZINI (yakavhurwa Gumiguru 2nd), David Wylie anoongorora yazvino vhezheni yeKomatsu Europe-112-tonne D475A-8, iro rakakura dozer repasirese, rinoshanda kukomba yeNarva muEstonia.
Kuti usvike ipapo, uyu muchina wakatakurwa kubva kufekitori yaOsats yaKomatsu muzvikamu kuenda kuchiteshi cheZeebrugge muBelgium. Izvo zvinhu zvakazoendeswa 2,300km mumarori kuenda kwaKomatsu's Baltem Semutengesi muEstonia, uko kwaive kwakazara zvakakwana mumusangano wepanzvimbo.
Iyo Dash 8 vhezheni yeD475A inogoneswa neiyo Stage 5 injini inogadzira 934hp kumberi magiya uye 1,040hp in reverse. Iine huni hwayo hurere U blade uye rakakura ripper, iyo vhezheni inoratidzwa pano inorema kuburitsa 115 tonnes!